मिडियामा मनपरी बोलि एकता भाडेको भन्दैँ झाक्रीमाथि खनिए भीम रावल, आखिर के के भने त ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मिडियामा मनपरी बोलि एकता भाडेको भन्दैँ झाक्रीमाथि खनिए भीम रावल, आखिर के के भने त ?
एमाले मिलाउन गठित कार्यदलका सदस्य एकता गरेर पार्टीभित्रै संघर्ष गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष भने अध्यक्ष केपी ओलीसँग एकता हुनै नसक्ने भन्दै ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने वा नयाँ पार्टी खोल्नुपर्ने पक्षमा छन् । यहीँ विषयमा माधव समूहको बैठकमा घम्साघम्सी भएको हो । खासगरी पार्टी मिलाउन सक्रिय कार्यदलका सदस्यहरु भीम रावलदेखि सुरेन्द्र पाण्डेहरुमाथि माधव समूहका केन्द्रीय सदस्यहरु खनिएका थिए ।
उनीहरुले रावलहरुमाथि केपी ओलीकै लाइनमा गएकोदेखि आफ्नो समूहमाथि घात गरेको आरोप लगाएका थिए । आफूहरुमाथि गम्भीर आरोप लगाएपछि रावलले पनि प्रतिवाद गरेका छन् । रावलहरुमाथि विजय गुरुङ विजय पौडेल रामकुमारी झाँक्री राजेन्द्र पाण्डे जगन्नाथ खतिवडा र चुँडामणी जंगलीले माधव नेपालको प्रतिनिधि बनेर माधव नेपाललाई नै घात गरेको धोका
दिएको आरोप लगाएका थिए । रामकुमारी झाँक्री त रावलसँग मुखमुखै लागेकी थिइन् । झाँक्रीले ओलीतिर पनि ठिक्क ओलीतिर पनि ठिक्क परेर द्वैध चरित्र देखाएको भनेपछि भीम रावलले प्रतिवाद गरे । रावलले आफूहरुले रातदिन नभनी पार्टी एकताका लागि मेहनत गरिरहेका बेला बाहिर मिडियामा मनपरी बोलेर वातावरण बिगार्न खोजेको भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए । रावलले बैठकमा १० बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसमा झपट रावलले भने समर्थन जनाउँदै यसैमा टेकेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । बैठकमा माधव समूहका उग्र भनेर चिनिएका नेताले रावलमाथि प्रश्न उठाउँदै केहीँ केन्द्रीय सदस्यले माधव नेपालको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले माधव नेपालसँग प्रचण्डको पटक-पटकको भेटवार्ताले आफूहरुलाई असहज लागेको बताएका थिए । यसले एमाले फुटाउने र एकताको वातावरण विगार्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरु बलराम बास्कोटा ठाकुर गैरे निरज आचार्य र अरुण नेपालहरुले पार्टीभित्रै लड्नुपर्ने फुटको दिशातिर जान नहुने सबै कम्युनिस्टहरुबिच एकता गरेर विशाल वाम पार्टी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।